Home » သတင်း » Hitachi Kokusai NAB 1800 မှာ SK ကို-HD2019 စတူဒီယိုနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုကင်မရာများအတွက်တီဗီနည်းပညာထဲကနေ Show ကိုဆုချီးမြှင့်၏အကောင်းဆုံးဆွတ်ခူး
Hitachi Kokusai NAB 1800 မှာ SK ကို-HD2019 စတူဒီယိုနှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုကင်မရာများအတွက်တီဗီနည်းပညာထဲကနေ Show ကိုဆုချီးမြှင့်၏အကောင်းဆုံးဆွတ်ခူး
Woodbury, နယူးယော့, မေလ 15, 2019 — The new SK-HD1800 HDTV studio and field production camera from Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ, Ltd (Hitachi Kokusai) was honored at the 2019 NAB ပြရန် withaBest of Show Award from Future plc publication TV Technology. The feature-packed SK-HD1800 combines the advanced CMOS imaging technology first implemented in Hitachi Kokusai’s popular Z-HD5500 camera – itselfaprevious Best of Show Award winner – withamotorized, remote filter wheel to deliver impeccable image quality for mobile and event-based productions even in venues with challenging LED lighting and displays.
Pairing the HDR-capable SK-HD1800 withaCCU from Hitachi Kokusai’s CU-HD1300 series forms an exceptionally flexible camera system supportingawide range of production infrastructures and industry trends, from 4K output over 12G-SDI to IP-based workflows using the SMPTE စံချိန်စံညွှန်းများ၏ ST 2110 suite ကို။
"NAB မှာ Show ကိုဆုပေးပွဲ၏အနာဂတ်အကောင်းဆုံးသူတို့ရဲ့ဆဌမနှစ်တွင်ဖြစ်ကြသည်" ဟုပေါလု McLane, အနာဂတ်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ, အကြောင်းအရာကဆိုသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းထိပ်တန်းကုန်သွယ်မှုပြပွဲ၏သန်းစတုရန်းပေပြပွဲကြမ်းပြင်တစ်ဝိုက်ကိုတှေ့မွငျအဖြစ် "ဒီအစီအစဉ်ကိုနည်းပညာထိပ်တန်းတီထွင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအလေးပေး။ မီဒီယာနည်းပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများခေါင်းနှစ်လုံးရှိရာ 2019 ဆုရရှိသူနှင့်လျာထားစာရင်းတွင်ပြသထားတယ်။ "
Qligent ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ပြန်သွားတိုင်းမှ Vision ၏ Analytics မှပလက်ဖောင်းခိုင်မာစေ - သြဂုတ်လ 15, 2019
EMEA ဒေသကြီးများအတွက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါရိုက်တာအဖြစ် MultiDyne ရက်ချိန်း Sebastian Mucha - သြဂုတ်လ 8, 2019
GatesAir end-to-အဆုံး HD ကိုရေဒီယိုဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ KAKT (FM ရေ) ထောက်ပံ့ - သြဂုတ်လ 8, 2019
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး	2019-05-15
ယခင်: မာရှယ်အီလက်ထရောနစ် CV420-CS အခုတော့ HDR ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: Goldcrest Post ကိုအမည်များမန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် Domenic ရော